Imveliso esetyenzisiweyo | Abavelisi beTshayina beTshayina, abaxhasi
I-1000ML yeBhotile yokuDlulisa Ubushushu be-Inks ze-Epson / Mimaki / Roland / Mutoh Printa
I-inki yangaphantsi kwesinyibilikisi esinyibilikisayo esenziwe ngezinto ezingavuthiyo kunye nezendalo njengezityalo, okanye ezinye izinto zokwenziwa. Umbala, oxutywe namanzi, unika imibala ye-inki.
I-ink yethu ye-sublimation isetyenziswa ngokubanzi kwi-Epson kunye nezinye iiprinta zohlobo, ezinje ngeMimaki, Mutoh, Roland njl njl. Ii-inki zangaphantsi zenziwe ngokucoceka okuphezulu kwamandla asasazekayo edayi. Yiyo loo nto zibonelela ngokusebenza kakuhle kwentloko yokuprinta kunye nobomi bemilomo eyandisiweyo. Kwakhona, uluhlu lwe-inki efanelekileyo ye-sublimation iyafumaneka ukuze isetyenziswe ngeentlobo ezahlukeneyo zamaphepha e-sublimation.
I-A3 A4 emnyama / yokuKhanya kobushushu bePhepha lokuPrinta kweLaphu lePhepha
Iphepha elimnyama nelikhanyayo lokuhambisa ubushushu nge-100% yomqhaphu inokusetyenziselwa iiprinta zombala eziqhelekileyo ze-inkjet, kwaye iyasebenza kwi-inki esekwe emanzini eyinki esekwe emanzini (inki yombala iyacetyiswa). Emva kweenkqubo zokuprinta kunye nokudlulisa ubushushu, imifanekiso inokudluliselwa kumalaphu omqhaphu, yiyo loo nto unokuvelisa iimveliso ezahlukileyo ezinje ngezikipa zakho, ii-singlets, ihempe zentengiso, imidlalo yezemidlalo. iminqwazi yeminqwazi, imiqamelo, imiqamelo, iiphedi zeempuku, iitshefu, iimaski zelaphu, imihombiso yasekhaya. Ipateni ehanjisiweyo kwiimveliso zikumgangatho ophezulu, kwaye zibonakaliswe njengemibalabala, ephefumlayo, ethambileyo kwaye ethwala umbala ongxamisekileyo wokuhlamba.